iPad - iPhone News | IPhone News (Pejy 4)
Ny iOS 9.3 dia mitondra kaonty ho an'ny iPad amin'ny iPad ihany, na dia misy nuances aza
Apple dia nanisy fiasa vaovao amin'ny iOS 9.3, ao anatin'izany ny fahaizana mamorona kaonty mpampiasa marobe amin'ny iPad ho an'ny fanabeazana.
Apple dia tsy hamela an'i Volkswagen hampiseho CarPlay tsy misy tariby amin'ny CES 2016
Ny orinasa Cupertino dia nanakana tanteraka ny fampisehoana iray izay nikasan'i Volkswagen hampiseho ny CarPlay amin'ny kinova tsy misy tariby.
Apple dia manomana headphones tsy misy tariby vaovao ho an'ny iPhone 7
Apple dia mety miasa amina telefaona Beats vaovao izay tsy misy tariby tanteraka ary miaraka amina cas de charger.
Oculus Rift amidy amin'ny $ 599 ankehitriny, izay rehetra tokony ho fantatrao
Ny fitaovana virtoaly tena andrasana dia efa amidy amin'ny $ 599, lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ity vokatra ity.
Apple dia manomana foibe data vaovao any Reno
Hanomboka ny fananganana ivon-data vaovao ao Reno antsoina hoe Project Hackleberry i Apple.
Ahoana ny momba ny headphones Bluetooth sasany amin'ny iPhone 7 manaraka?
Apple dia mety mampiditra headset Bluetooth isaky ny iPhone 7 novidintsika. Ahoana raha misy kapoka sasany?
Tonga ny fanavaozana ny Google Maps ho an'ny iOS
Ny fanavaozana farany ny Google Maps ho an'ny iOS dia ahafahantsika mahazo valisoa ho takalon'ny fifandraisana amin'ny rindrambaiko.
Mivarotra tsara noho ny iPad an'ny Apple ve ny Microsoft Surface?
Araka ny lahatsoratra maro, ny fivarotana ny Microsoft Surface dia mihoatra ny an'ny iPad, fa raha ny fandinihana ny fandalinana dia diso tanteraka izany.
IPad Air 2 Nijirika mba hampandeha ny Mac OS
Tsy nofinofin'ny maro izany, saingy akaiky izy io. Ary izy ireo dia nijirika iPad Air hampandehanana rafitra miasa amin'ny birao Apple: Mac OS 7.5.5.
Ankizy mandany mihoatra ny 5000 euro amin'ny lalao iPad
Nile 7 taona dia nandany 5.500 XNUMX euro niantsena tao anatin'ny lalao Jurassic World ho an'ny iPad
Apple tamin'ny 2015: vokatra vaovao, fahatsapana taloha ihany
Ny taona 2015 dia efa an-taonany maro izay tsy nandefasan'i Apple vokatra tena vita, toy ny hoe "Beta" taona
2 × 16 Podcast an'ny Actualidad iPad: Apple amin'ny taona 2016, fanantenana sy tsaho
Podcast farany tamin'ny taona izay hamerenantsika izay tiana ho hita amin'ny 2016.
Ny valintenin'i Steve Jobs momba ny karaman'ireo injenierany
Evan Doll dia nanambara resaka nifanaovan'ny injeniera iray tamin'i Apple momba ny antony tsy itakiana injeniera bebe kokoa ao amin'ilay orinasa.
Hevitra momba ny iOS ho an'ny iPad miaraka amin'ny manager windows
iOS 9 nony farany dia nitondra ny efijery nizara ho an'ny kinova iOS an'ny iPad, saingy mbola misy zavatra tsy ampy: mpitantana varavarankely izay azonao jerena amin'ity hevitra ity.
Ankafizo sarimihetsika maimaim-poana 5000 avy amin'ny iPad-nao
Ankafizo avy amin'ny Archive.org sarimihetsika mahafinaritra mihoatra ny 5000 amin'ny tantaran'ny sinema maimaim-poana tanteraka sy amin'ny fahafaha-mijery azy ireo amin'ny iPad.
60 minitra ao anatin'ny Apple, fanadihadiana iray izay tsy afaka mitsahatra mijery
60 Minitra dia mamela antsika tatitra tsara momba an'i Apple izay ahitantsika ny atin'ny orinasa.
Ny porofon'ny foto-kevitra amin'ny iPad dia mampiseho ny windows ho OS X
Ny fampidirana ny efijery fisarahana misy lahasa amin'ny iOS 9 no akaiky indrindra hitanay nitovy tamin'ny fitantanana varavarankely amin'ny iPad.
Kodi dia misy amin'ny Apple TV 4 izao
Kodi ho an'ny Apple TV dia misy amin'ny kinova preliminary ankehitriny
Apple dia mety miasa amin'ny endrika audio Resolution Avo
Apple dia mety miasa amin'ny endrika endrika vahaolana avo lenta ho an'ny mozika amin'ny 2016
iOS 9.2.1 dia toa manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana taloha
Toa ny Beta voalohany an'ny iOS 9.2.1 dia nanatsara ny fahombiazany amin'ny iPhones sy iPad taloha.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary YouTube amin'ny Softorino YouTube Converter
Ny fampidinana horonantsary na mozika avy amin'ny YouTube ary famindrana azy ireo amin'ny iPhone na iPad dia mora kokoa noho ny hatramin'izay noho ny Softorino YouTube Converter
Podcast 2 × 15 an'ny Actualidad iPad: Jiro sy aloky ny Apple amin'ny 2015
Izao no fotoana hanombanana ny tsara sy ny ratsy an'ny Apple amin'ity taona ity. Fitaovana vaovao, kojakoja vaovao, serivisy vaovao ... Ny tsara sy ratsy indrindra amin'ny taona ao amin'ny orinasa paoma
IPad Air 3 dia ho lany amin'ny 3D Touch
Ny iPad Air 3 dia tsy hampiditra ny teknolojia 3D Touch
Apple hampiasa efijery 3D Touch amin'ny iPad aorian'ny iPhone 7
Apple dia mbola tsy afaka mampiditra efijery 3D Touch amin'ny takelaka, fa ny loharanom-baovao kosa dia nilaza fa afaka manampy efijery mora tohina aorian'ny iPhone 7 izy ireo
[RUMOR] Ny 3D Touch an'ny iPhone 7 dia hitovy amin'ny iPhone 6s; iPad Air 3 tamin'ny 2016
Raha ny filazan'ilay mpandalina malaza indrindra amin'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Apple, ny 3D Touch an'ny iPhone 7 dia tsy hiova fiovana lehibe raha oharina amin'ny maodely ankehitriny.
Apple dia mijanona ho laharana voalohany amin'ny fiarovana ny solosaina
Symantec sy FireEye dia namoaka tatitra momba ny olana ara-piarovana misy eo amin'i Apple ary be fanantenana.
Fampitahana hafainganam-pandeha eo amin'ny iPad rehetra [VIDEO]
Amin'ity horonantsary ity dia hitantsika amin'ny an-tsipiriany ny fampitahana ny iPad rehetra navoaka hatreto.
Ho tonga any India ny iPad Pro amin'ny herinandro ambony
Ny iPad Pro dia ho tonga amin'ny herinandro ambony any India izay ahafahany mividy amin'ny vidiny mitovy amin'ny hita any Eropa
Podcast 2 × 14 an'ny iPad androany: iOS 9.2, fiambenanaOS 2.1, OS X 10.11.2 ary tvOS 9.1
Fizarana vaovao amin'ny podcast isan-kerinandro izay anaovantsika fanadihadiana ny vaovao momba ny iOS, tvOS, watchOS ary OS X toy ny ao amin'ny kinova farany.
Djay Pro dia tonga amin'ny iPad avy amin'ny tanan'ny Algoriddim
Ny fampiharana famokarana sy fanovana mozika tsara indrindra dia ny iPad Pro miaraka amin'i Algoriddim's "djay Pro".
IOS 9.2 Misintona rohy ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch
Rohy fampidinana mivantana IOS 9.2 ho an'ny fitaovana rehetra
Ny tsaho dia mitondra antsika iPhone 7 izay porofon'ny zava-drehetra
Mitohy hatrany ny tsaho momba ny iPhone 7 manaraka, tolo-kevitra iray izay hamaha ny olan'ny efijery vaky ao amin'ny riandrano.
Fetsy iPad sy iPhone 21 mety tsy fantatrao momba izany
Manolotra anao ny tetika tsara indrindra ho an'ny iPad sy iPhone izahay izay hanatsara ny fomba fifandraisanao amin'ny fitaovanao.
Zodiac: Orcanon Odyssey RPG misotro amin'ny Final Fantasy
Ity JRPG ity dia antsoina hoe Zodiac: Orcanon Odyssey no ampahany voalohany amin'ny saga izay mampanantena zavatra betsaka ary hofakafakainay amin'ny Actualidad iPad
Ny kaontinao Netflix dia mety ampiasain'ny hafa
Kaonty Netflix maro no voajirika ary azon'ny mpampiasa hafa ampiasaina.
Podcast 2 × 13 an'ny Actualidad iPad: iPhone 7 ary zoma Mainty tsy misy fotony
Ny tsaho momba ny iPhone 7 vaovao, Zoma Mainty ary ny vaovao hafa ao amin'ny podcast an'i Actualidad iPad isan-kerinandro
IPhone tsy misy jack headphone? Amin'ny Apple dia azo atao izany
Apple dia afaka nanala ny jack headphone avy amin'ny iPhone 7 vaovao mba hahatonga azy io ho kely kokoa
Apple dia miroso amin'ny famolavolana drafitra miaraka amin'ny A9X
Apple dia manohy manatsara isan'andro isan'andro, porofon'izany amin'ny famolavolana processeur an'ny fitaovana iOS farany, ny A9X amin'ny iPad Pro.
Fa maninona no Apple Pencil no tsara kokoa noho ny stylus iPad hafa?
Amin'ny fampitahana dia ahitantsika ny maha samy hafa ny Apple Pencil sy ny mpifaninana aminy.
Geekbench 3 ho an'ny iOS dia misy maimaim-poana
Ny fampiharana fandrefesana fimailo malaza indrindra amin'ny App Store, Geekbench 3, dia misy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Atsofohy ho an'ny Apple TV, mpilalao multimedia feno indrindra
Notsapainay i Infuse, ilay haino aman-jery vaovao an'ny Apple TV izay mamela anao hijery izay atiny zaraina amin'ny tambajotrao.
Podcast 2 × 12 an'ny Actualidad iPad: ny iPhone 7 miaraka amin'i Stylus, ilay Apple Watch vaovao ary tsaho maro hafa
Ny iPhone 7 vaovao miaraka amina stilosy namboarina sy ny maodely Apple Watch manaraka no kintan'ity podcast iPad News vaovao ity
Namerina ny tenimiafin'ny mpampiasa maro i Amazon
Namerina ny tenimiafin'ny mpampiasa azy i Amazon taorian'ny fanafihana mety hiteraka fatiantoka data sy fiarovana amin'ny vavahady
Izy ireo dia mampiasa ny Apple Pencil ho toy ny refy, synthesizer ary mpamorona sary 3D
Ny Apple Pencil dia marefo amin'ny tsindry, koa maninona raha ampiasaina ho refy? Mety, ankoatry ny zavatra hafa.
Zoma Mainty 2015, ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny taona
Manangona ny tolotra tsara indrindra avy amin'ny Black Firday amin'ity taona ity izahay miaraka amin'ny fihenam-bidy mahavariana amin'ny entana teknolojia.
Famerenana ny Dock ofisialy ho an'ny Apple Watch
Ny Appel Watch Dock dia lafo vidy nefa misy ny charger magnetika.
Apple Watch ihany no miasa amin'ny charger voamarina
Apple dia mampiasa ny fenitra Qi handoavana smartwatch saingy tsy avelany hiasa miaraka amin'ny Apple Watch ny charger hafa izay mampiasa azy
Apple dia manamafy ny olana momba ny fianjerana iPad Pro
Ny iPad Pro dia mijaly noho ny olana vitsivitsy izay fantatr'i Apple ary ezahiny hamboarina.
iPad Pro VS Microsoft Surface, mitovy nefa tsy mitovy
Ny horonan-tsary iray dia mampiseho ny fitoviana sy ny tsy fitovian'ny iPad Pro sy ny Microsoft Surface, ny takelaka roa matihanina amin'izao fotoana izao.
Ahoana ny fomba hijerena ny haavon'ny batterin'ny Apple Pencil
Mba hijerena ny toetoetran'ny bateria an'ny Apple Pencil anao dia mila mamela widget vaovao bateria ho an'ny iOS 9 ianao amin'ny iPhone na iPad Pro.
Podcast 2 × 11 an'ny Actualidad iPad: eo am-pelatanantsika ny iPad Pro
Amin'ity fizarana amin'ny podcast ity izahay dia mamakafaka ny hery sy ny fahalemen'ny iPad Pro miaraka amin'ny hevitr'ireo mpihaino roa izay efa manana izany eo am-pelatanany.
Fitsapana fiaretana Apple Pencil
Ny fitsapana fanoherana voalohany an'ny Apple Pencil dia mampiseho fa fitaovana maharitra mahatohitra ny famolahana sy ny fiatraikany izany rehefa mamaly
Ny Apple Pencil dia mandalo ny fitsapana fanoherana voalohany
Tsy ny fitaovana ihany no mandalo fitsapana fanoherana, fa toy izany koa ny kojakojany. Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny fomba fitondran-tenany ao amin'ny Apple Pencil.
Ny RAM 4GB ao amin'ny iPad Pro dia nilaina tamin'ity [video] ity
Ilay fitaovana vaovao lehibe avy amin'ny orinasam-paoma dia misy RAM 4GB ka tsy hanan-javatra hivezivezena izahay izao.
Ny iPad Mini 4 dia manana efijery tsara kokoa noho ny iPad Pro
Ny iPad Mini 4 dia manana ny efijery tsara indrindra ananan'ny takelaka LCD, mandresy ny iPad Pro
Olana voalohany IPad Pro: tsy hivadika aorian'ny famandrihana
Ny olana voalohany mifandraika amin'ny iPad Pro dia manomboka miseho, izay tsy mamela ny famadihana ilay fitaovana hampiasaina aorian'ny famoahana azy.
Wozniak dia aleony laptop amin'ny iPad Pro
Wozniak dia niresaka tamin'ny fihaonambe iray ary nilaza fa aleony solosaina finday noho ny iPad Pro, fa gaga ve isika amin'ilay olona nieritreritra ilay solosaina manokana?
Ianaro ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPad Pro, iPad Air 2 ary iPad Mini 4
Mampahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPad Pro, iPad Air 2, ary iPad Mini4. Processeur, écran, RAM, sns.
Ny fiainana bateria an'ny iPad Pro vaovao dia mitoetra ho mitovy amin'ny maodely iPad teo aloha, manodidina ny 10 ora.
IPad Pro Beats Surface Pro 4 amin'ny Stylus Tracking
Ny famakafakana video dia mampiseho fa ny iPad Pro dia manara-maso tsara kokoa ny volo noho ny Surface Pro 4 farany teo.
IPad Pro Lightning dia manohana ny fifandraisana USB 3.0
Ny iPad Pro sy ny mpampitohy Lightning azy ireo dia manohana tanteraka ny famindrana angona USB 3.0.
PDF Expert 5, fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny PDF Expert 5 dia fampiharana voaloa izay mazàna manana vidin'ny fividianana $ 9.99, saingy amin'ity herinandro ity dia maimaim-poana ao amin'ny App Store izy ity.
iPad Pro dia mamela keyboard vaovao vaovao feno kokoa
Apple dia nanolotra kitendry vaovao feno sy feno kokoa hanararaotana ny efijery lehibe an'ny iPad Pro vaovao, 12.9 santimetatra
Ny iPad Pro… fitaovana sarotra amboarina
Ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia nanaparitaka sy nandatsa-dra ny tsiambaratelon'ny iPad Pro ary nahita ny fahasarotan'ny fanamboarana singa sasany
Ahoana ny fananganana ny Siri Remote
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonan-tsary hoe inona ireo safidy fanamboarana atolotry ny Siri Remote vaovao sy ny fomba ahafahantsika mamerina azy io sy mampifangaro azy amin'ny Apple TV
Podcast 2 × 10 an'ny Actualidad iPad: Apple Music tonga amin'ny Android sy maro hafa
Ny fahatongavan'i Apple Music ho an'ny Android, ny fanombohana ny iPad Pro vaovao ary ny tsy fahombiazan'ny sarimihetsika Steve Jobs
Midira amin'ny serivisy amerikana noho ny Unlocator
Unlocator dia manolotra anao VPN mora amboarina ary tsy misy fiatraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana.
Apple dia namoaka fanambarana voalohany momba ny iPad Pro
Apple dia vao nanomboka ny fanambarana voalohany momba ny iPad Pro izay mahatratra ny tsena rahampitso alarobia 11 novambra
Plex Review ho an'ny Apple TV. Ny famakiam-boky multimedia anao.
Plex dia mamela anao hijery ny atiny media amin'ny tranombokinao amin'ny fahitalavitrao amin'ny alàlan'ny fampiharana Apple TV
2 × 09 Podcast an'ny Actualidad iPad: Apple TV vaovao, Betas ary maro hafa
Fizarana vaovao an'ny Actualidad iPad Podcast izay hiresahantsika ny Apple TV vaovao sy vaovao maro mifandraika amin'i Apple.
Procreate 3 dia mandray ny iPad Pro sy ny Apple Pencil
Ny fanavaozana Procreate 3 mifanaraka tanteraka amin'ny iPad Pro sy Apple Pencil dia tonga ao amin'ny iOS App Store.
Sintomy ny MovieBox ho an'ny iOS 9 tsy misy Jailbreak
Ny fampiharana MovieBox ho an'ny iOS 9.1 dia misy amin'ny tsena hafa ho an'ny iOS fantatra amin'ny hoe vShare na dia tsy misy Jailbreak aza.
Famerenana ny Apple TV taranaka faha-4 vaovao
Hita izao ny Apple TV vaovao ary asehonay anao ny fiheveranay voalohany momba ilay fitaovana Apple vaovao sy horonan-tsary fampisehoana
Adobe Photoshop dia mifanaraka amin'ny iPad Pro ankehitriny
Adobe dia nanavao ny fampiharana Photoshop roa lehibe ho an'ny iOS, Fix and Mix, miaraka amin'ny fanohanana feno ho an'ny iOS 9 sy ny iPad Pro.
Izahay dia manome anao lalao mahaliana ho an'ny Apple TV vaovao
Amin'ity fanangonana ity dia hataonay izay hampialana voly anao mba hahafahanao mahazo tombony be indrindra amin'ny Apple TV ho an'ny taranaka fahefatra.
Vidio ny Apple TV, 32GB sa 64GB?
Inona no maodely Apple TV ilainao? Ny 32GB sa ny maodely 64GB? Manome tsipiriany vitsivitsy izahay izay mety hanampy anao hanapa-kevitra.
SteelConnect, ilay gadget farany ho an'ny Apple Pencil
Apple dia mandefa miaraka amin'ny iPad Pro vaovao, ny tondro ampiasaina amin'ny takelaka, Apple Pencil. Fa ... ahoana raha very izany? SteelConnect dia vahaolana ho azy
Vahaolana feno fahendrena hialana amin'ny fahaverezan'ny Apple Pencil anao
Ilay pointer natolotra hampiasaina amin'ny iPad Pro dia manana kilema tsy fananana fanohanana mba tsy hahavery azy. Ity no vahaolana tsara indrindra.
Mampiasa Moto 360 amin'ny iPhone. Android Wear VS watchOS
Nampiasainay ny Moto 360 miaraka amin'ny Android Wear mifandray amin'ny iPhone ary holazainay aminao ny niainany.
2 × 07 Podcast an'ny Actualidad iPad: clones Netflix, Apple Music ary iPhone
Podcast vaovao an'ny Actualidad iPad izay hiresahantsika mivantana ny vaovao amin'ny herinandro, toy ny fahatongavan'i Netflix tany Espana
Ny marina momba ny lesoka fiarovana 1Password
Ny marina momba ny lesoka fiarovana 1Password, inona izany ary iza no voakasik'izany.
Podcast 2 × 06: Chipgate, Burngate ary maro hafa
Fizarana vaovao amin'ny podcast izay hamakafakanay ireo iPhone 6 vaovao sy ny olana mety hitranga amin'ireo mpanodina sy may.
iOS 9 dia manome antsika fanjifana amin'ny antsipiriany ireo rindranasa
iOS 9 dia manome antsika antontan'isa momba ny fanjifana amin'ny antsipiriany kokoa noho ny amin'ny iOS 8, izay ahitantsika ny ora bateria lanin'ny rindranasa
FIFA 16, na ny fomba famotehana saga mahatalanjona
EA Sports dia nahavita tamin'ny FIFA 16 hamarana ny faharetan'ny mpanaraka an-tapitrisany an'ity saga ity.
Apple manavao ny Bluetooth an'ny iPhone 6, 6 Plus ary iPad Air 2
Araka ny tranokalan'i Apple, ny iPad Air 2 sy ny iPhone 6 ary ny iPhone 6 Plus dia samy nanavao ny kinova Bluetooth ho 4.2
Tsy ho azonao atao intsony ny misintona ireo rindranasa nesorina tao amin'ny App Store
Apple dia nanapa-kevitra ny hisintona tanteraka ireo rindranasa izay nesorin'ny mpamorona azy tao amin'ny App Store.
Podcast 2 × 05: Vaovao Microsoft ary efa-taona tsy i Steve Jobs
Izahay dia mamakafaka ny vaovao avy amin'i Microsoft miaraka amin'ny Surface Pro 4 ho fitaovana malaza indrindra ary miresaka momba ny vanim-potoana Steve Jobs izahay. Misy toerana hiresahana ny fahatsapana voalohany an'ny El Capitan sy ny iOS 9.1 Beta 4
Ianaro ny momba ny fiasa vaovao an'ny keyboard QuickType ho an'ny iPad ao amin'ny iOS 9
Ny kitendry vaovao ao amin'ny iOS 9 ho an'ny iPad dia mitondra bara hitsin-dàlana misy rohy haingana amin'ny asa fampidirana lahatsoratra toy ny fanapahana, kopia, apetaka ary endri-tsoratra
Podcast 2 × 04: OS X El Capitan dia eto, toy ny iOS 9.0.2 sy 9.1 Beta 3
Apple dia namoaka ny OS X El Capitan, ios 9.0.2 ary koa ny beta fahatelo an'ny iOS 9.1. Ankoatr'izay, ny iPhones 6s sy 6s Plus dia namaky firaketana vaovao momba ny varotra.
Fa maninona aho no mifikitra amin'ny Apple Music aorian'ny fotoam-pitsapana
Taorian'ny fitsapana nandritra ny telo volana Apple Music dia nanapa-kevitra ny hanohy ny famandrihana aho ary hanomboka handoa ny serivisy. Ireo no antony manosika ahy.
Maninona ny Apple Pencil no mandresy ny Wacom Cintiq
Linda Dong, mpamolavola iray izay niasa tao amin'ny departemantan'ny prototyping an'ny Apple, dia mieritreritra fa ny Apple Pencil dia manoatra ny Wacon Cintiq ary milaza amintsika ny antony.
Rohy fampidinana IOS 9.0.1 ho an'ny fitaovana rehetra
Manolotra anao ny rohy fampidinana iOS 9.0.1 ho an'ny fitaovana mifanentana rehetra izahay.
Podcast 2 × 03 an'ny Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 ary maro hafa
Fizarana vaovao an'ny podcast Actualidad iPad izay anaovantsika ny fandalinana ny iOS 9, ny vaovaony, ny rindranasa efa nohavaozina, sns.
Ny iPad Mini 4 dia mametraka ny efijery takelaka tsara indrindra hatramin'izay
Ny efijery iPad Mini 4 dia mampiseho taratra 2%, fahombiazana mbola tsy re amin'ny takelaka takelaka mandraka androany.
Microsoft CEO dia mampiasa "iPhone Pro" hanehoana fomba fijery Outlook ho an'ny iOS
Ny CEO Microsoft Satya Nadella dia nivazivazy momba ny "iPhone Pro" nandritra ny dian'ny Outlook for iOS tao Dreamforce.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 9
Nanangona ny fanontaniana mahazatra momba ny iOS 9 izahay ary omenay anao ny valiny amin'ity lahatsoratra ity
Nahazo fanavaozana lehibe ny fampiharana iOS an'ny MEGA
Ny kinova vaovao an'ny rindranasa MEGA ho an'ny iOS dia misy ny kinova azy manokana ho an'ny iPad.
Famelana ny fandaharana IOS 9 manerantany
Rahoviana no ho azo alaina ny iOS 9? Mampiseho anao ny sarintany misy ora sy latabatra misy tanàna be solontena indrindra izahay.
iPad Pro vs. Fifaninanana: mifanatrika mivantana ireo takelaka lehibe
Ny iPad Pro dia manatevin-daharana takelaka lehibe hafa amin'ny tany saika tsy voadinika. Inona ny takelaka tsara indrindra mihoatra ny 12 santimetatra?
Mety ho iPad Pro ve no tena safidy hafa amin'ny MacBook? Raha ny pitsipitsony sy ny vidiny dia toa izany, saingy ny iOS ihany no misakana azy io.
IOS sy mpilalao Android dia hiaraka ao amin'ny Minecraft
Ny kinova farany Minecraft: Pocket Edition dia mamela ny mpampiasa iOS, Android ary Windows 10 Mobile hilalao amin'ny sehatra iray ihany.
Haharitra hafiriana ny fakana ny bateria iPad Pro?
Ny iPad Pro dia manolotra fizakan-tena folo ora miaraka amin'ny bateria iray eo anelanelan'ny iPad 3 sy iPad Air.
Zavatra 10 momba ny iPad Mini 4
Hahafantatra zavatra folo momba ny iPad Mini 4 vaovao natolotr'i Apple izahay mba hahafantaranao amin'ny antsipiriany ny takelaka Tim Cook vaovao.
Apple Pencil sy Smart Keyboard, natao ho an'ny iPad Pro
Ny iPad Pro dia miaraka amina kojakoja roa ilaina mba hanararaotra azy tsara: Apple Pencil sy Smart Keyboard
2 × 02 iPad News Podcast: Fandinihan-tena momba ny lohatenin'i Apple
Fizarana vaovao an'ny Actualidad iPad Podcast izay hiresahantsika ny zava-nitranga rehetra nandritra ny lahateny ho an'ny fampisehoana ireo iPhones vaovao
3D Touch, tonga amin'ny iOS 9 ny revolisiona
Apple dia nanolotra ny 3D Touch, fomba vaovao ifandraisana amin'ny iOS izay tsy hoe mahalala hoe aiza no tsindrio fa ny hery anaovantsika azy.
Steve Jobs dia niantso ny stilosy ho tsy fahombiazana lehibe tamin'ny 2004
Steve Jobs dia nanambara tamin'ny 2004 fa tsy manana ho avy ny stazy ary tsara kokoa ny mandefa azy ireo. Inona no niova tao amin'ny Apple hampiditra ny Apple Pencil?
Tonga ny iPhone 6S sy 6S Plus, ireo no vaovao
Ny iPhone 6S dia miaraka amin'ny fakan-tsary 12 MP, processeur vaovao, miloko volamena-volamena ary miaraka amin'ny 3D Touch. Ireo no vaovao.
Ny tsara indrindra amin'ny Surface ankehitriny amin'ny iPad noho ny Logitech
Logitech dia manolotra antsika fonosana vaovao, Block, izay manambatra ny lafy tsara indrindra amin'ny Microsoft's Surface
Izay ho hitantsika amin'ny hetsika Apple amin'ny 9 septambra
Haneho amintsika ny vaovaony i Apple amin'ny 9 septambra. Asehonay aminao ny famintinana izay antenainay hahita izany andro izany.
Podcast 2 × 01 an'ny Actualidad iPad: vanim-potoana premiere izahay
Andiany voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny podcast misy antsika izay manadihady ny vaovaon'ny haitao sy lohahevitra hafa toy ny andiany, sarimihetsika ary mozika.
Ny tadin'ny sensor ho an'ny Apple Watch dia mety ho tonga amin'ny 2016
Apple dia mety miasa amin'ny tadin'ny sensor ho an'ny Apple Watch izay mety ho tonga amin'ny fiandohan'ny 2016 ihany koa
Ny fomba fiasan'ny iPad multitasking amin'ny iOS 9
iOS 9 dia mitondra safidy multitasking vaovao ho an'ny iPads. Azavainay izay misy azy ireo sy ny fomba fiasan'izy ireo
Fakan-tsary, mpanonta ary antik hafa avy any Apple
Apple dia manana katalaogim-bokatra midadasika kokoa noho ny ankehitriny, miaraka amin'ireo mpanonta, scanner, fakantsary, mpandahateny ary vokatra hafa izay tsy niverina.
Rohy fampidinana IOS 8.4.1
Atolotray ny rohy fampidinana ho an'ny iOS 8.4.1 navoakan'ny Apple androany tolakandro
Intuos Creative Stylus 2, stylus matihanina ho an'ny iPad
Ny penitra nomerika Wacom Intuos Creative 2 ho an'ny iPad dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo izay mitady pen nomerika ho an'ny iPad.
watchOS 2.0 Beta 5, vaovao sy fahatsapana
Rehefa afaka andro vitsivitsy nanaiky ny WatchOS 2.0 beta 5 dia nahita ny fahatsapana voalohany izahay
Famerenana ny Loopie Milanese ho an'ny Apple Watch
Famerenana ny fatorana Milanese Loop ho an'ny Apple Watch, fehin-tany am-boalohany misy famaranana miavaka amin'ny vidiny mahaliana
Ny fiantraikan'ny hetra amin'ny vidin'ny Apple isaky ny firenena
Ny vokatra Apple dia lafo kokoa any Espana noho ny any Etazonia, saingy noho ny hetra ampiharina.
Steve Jobs: The Man Machine, fanadihadiana fanadihadiana voatsikera mafy
Navoaka ny tranofiara ofisialy voalohany an'ny fanadihadiana "Steve Jobs: The Man Machine", momba ny lafiny maizin'i Steve Jobs.
ZNAPS, mpampitohy andriamby hamenoana ny iPhone sy iPad
Ny famandrihana magnetika ny iPhone na iPad anao dia mora noho ny ZNAP, adaptatera izay mifamatotra amin'ny tariby tany am-boalohany ary mifamatotra amin'ny andriamby
iPod Touch na iPad Mini, iza no hividy?
Ny fividianana iPod Touch na iPAd Mini dia mety tsy dia mazava loatra amin'ny fijerena ny mombamomba azy tsirairay.
Logi BLOK no tranga farany ho an'ny iPad anao
Amin'ity tranga iPad vaovao ity avy any Logitech ianao dia hamadika ny iPad ho zavatra tena mitovy amin'ny Microsoft Surface.
IPod Nano sy Shuffle dia tsy mifanaraka amin'ny Apple Music
Apple tsy mamela iPod Nano sy Shuffle hilalao mozika alaina amin'ny Apple Music
Mitandrema amin'ny fisolokiana hita ao Safari
Fisolokiana miseho ho fanohanana an'i Apple dia hanandrana hangalatra ny mombamomba antsika manokana. Manazava ny fomba hisorohana azy izahay.
Balloon Fight, lalao Nintendo misavoana ao amin'ny App Store
Balloon fight dia lalao Nintendo tany am-boalohany izay hitanao ao amin'ny App Store maimaim-poana
Ny zavatra tsy tiako amin'ny Apple Music sy izay tokony hohatsarain'i Apple
Apple Music dia manana toetra tsara sy lesoka lehibe. Asehontsika ny sasany amin'ireo izay nahasarika ny sainay indrindra.
OdysseusOTA dia mamela anao hidina ambany amin'ny iOS 6.1.3
Ity fitaovana ity dia hahafahanao miverina amin'ny iOS 6.1.3 avy amin'ny kinova iOS, raha mbola manana iPhone 4S na iPad 2 ianao.
Manana iPad 2 / iPhone 4S ianao ary tsy tianao ny iOS vaovao? Azonao atao ny mihena amin'ny iOS 6.1.3
Nahavita nampidina ny iPad 2 sy ny iPhone 4S ho an'ny iOS 6.1.3 ny mpamorona iray. Vaovao tsara ho an'ireo izay tsy tia iOS 7 na avo kokoa
Izahay dia nanandrana ny Apple Watch, ny smartwatch tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Izahay dia mamakafaka ny Apple Watch, ilay famantaranandro Apple izay nanova ny tsenan'ny smartwatch, miaraka amin'ny sary sy ny video miaraka amin'ny antsipiriany rehetra
Ny fomba fitehirizana bateria ao amin'ny iOS 9 dia mampihena ny herin'ny iPad
Ny fanandramana farany dia manamarina fa ny maody fitahirizana bateria ao amin'ny iOS 9 dia mampihena ny fahombiazan'ny processeur hatramin'ny 40%.
1 × 31 Podcast an'ny Actualidad iPad: Apple Music, Apple Watch ary maro hafa
Ny Apple Watch 2 vaovao ho an'ny 2016 sy ny resa-be an'ny Apple Music dia sasany amin'ireo lohahevitra resahanay amin'ity podcast ity.
Apple dia namoaka ny iOS 9 Beta 2 sy ny Watch OS 2 Beta 2
Ity tolakandro ity dia dihin'ny betas, ary Apple dia namoaka ny iOS 9 - Beta2, Watch OS 2 - Beta 2 ary fanontana iray hafa an'ny OS X El Capitan.
Ahoana no amantarana ireo tariby tselatra sandoka
Apple dia manome torolàlana momba ny fomba hamantarana ireo tariby tsy voamarina ao amin'ny tranokalany
Ny iPad Mini voalohany dia nanjavona tao amin'ny Apple Store
Raha mieritreritra ny hanana mini iPad tany am-boalohany ianao dia tsy ho afaka intsony. Vao nanjavona tao amin'ny magazay Apple sy Internet izy io
1 × 30 Podcast an'ny Actualidad iPad: antsipiriany bebe kokoa momba ny fanavaozana ny iOS 9 sy ny Apple
Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny vaovao izay tsy nasehon'i Apple antsika tamin'ny Keynote-ny, fampahalalana bebe kokoa momba ny Apple Music, ny iOS 9 Jailbreak, sns.
Herinandro iray fanandramana ny iOS 9 Beta 1
Aorian'ny herinandro iray hampiasana ny iOS 9 dia manana ny fahatsapako momba ny Apple beta voalohany aho.
OS X El Capitan: Hevitra sy vaovao voalohany
Aorian'ny fitsapana mandritra ny 24 ora ny OS X El Capitan dia lazaiko aminao ny fiheverako voalohany mifantoka amin'ny vaovao lehibe.
iOS 9 dia ahafahanao mitahiry ny fampifandraisana mailaka ao amin'ny iCloud
Apple miaraka amin'ny iOS 9 dia ahafahantsika mitahiry ireo firaketana voaray amin'ny alàlan'ny mailaka mivantana ao amin'ny iCloud.
1 × 29 Podcast: WWDC 2015 Manokana
podcast anaovantsika ny vaovao rehetra avy amin'ny WWDC 2015 izay nanehoana ny iOS 9, OS X 10.11 El Capitan ary ny watchOS 2.0.
Hodinihinay tsara ny Apple Music
Apple te-hampalaza ny Apple Music vao navoakany, ireo no lakilen'ny serivisy mozika streaming izay hatomboka amin'ny 30 Jona.
watchOS 2.0 Mitondra Lock Locking ho an'ny Apple Watch
Ny Apple Watch dia efa mampiditra ny hidim-pahavitrihana amin'ny watchOS 2.0
Ahoana ny fampidinana trivia triatra (tsy misy doka) maimaimpoana amin'ny IGN
Amin'ity volana ity, ny IGN dia manolotra antsika ny lalao Trivia Crack (tsy misy doka) halefa maimaimpoana.
Inona no azontsika antenaina amin'ny Keynote an'i Apple?
Misy mihoatra ny iray andro sisa ho an'ny fampisehoana an'i Apple ary lazainay aminao izay azonay antenaina amin'izany.
Tweetbot na ny fomba hahafatesan'ny fahombiazana
Tweetbot ho an'ny Mac dia tonga indray miaraka amin'ny fivoaran'ny endrik'olona ary very asa mihitsy aza. Ary ny kinova ho an'ny iPad?
Magic Piano avy amin'i Smule, fomba mahafinaritra hitendry piano
Magic piano dia mitondra mozika ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny fitondrana ny piano amin'ny iPhone sy iPad anao
1 × 28 iPad Podcast Vaovao: HomeKit, Google I / O, WWDC sy maro hafa
Podcast vaovao izay anaovantsika ny vaovao avy amin'ny Google, izay azon'i Apple aseho amin'ny WWDC 2015 sy ireo kojakoja vaovao ho an'ny HomeKit.
Google I / O dia nanamora ny fandehan'i Apple
Google I / O dia nahavita vaovao vitsivitsy ary ireo izay efa nambara dia efa natolotr'i Apple herintaona lasa izay.
Ny fitaovana voalohany ho an'ny HomeKit dia mety ho tonga amin'ny herinandro ambony
Ireo kojakoja voalohany misy HomeKit dia hita tao anatin'ny herinandro.
Apple dia hampiditra programa tsy fivadihana, "Apple Pay Rewards"
Apple dia mikasa ny hampiditra programa tsy fivadihana na valisoa vaovao ao amin'ny WWDC mikendry hampiroborobo ny Apple Pay antsoina hoe "Apple Pay Rewards."
Famerenana Pebble Time: mitovy kokoa
Famakafakana ny Pebble Time vaovao izay ifanakalozan-kevitra momba ny fitaovana, ny famaranana, ny rindrambaiko ary ny fizakan-tena.
1 × 27 Podcast an'ny Actualidad iPad: iOS 9, mozika mivantana, Workflow ary maro hafa
Andiany vaovao amin'ny podcast isan-kerinandro an'ny Actualidad iPad izay amakafakainay izay rehetra nitranga tao amin'ny Apple, ny rafitra sy ny fampiharana azy
Ahoana ny fomba hizarana ny toerana amin'ny iOS
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao manova ny toerana tianay zaraina amin'ny iPad anay.
Storyrider, boky izay mamorona tantara ny fanapaha-kevitrao
Ny Storyrider dia fampiharana ny bokin-jaza ho an'ny iPad, ka ny mpamaky no manapa-kevitra ny amin'ny handrosoana, manova ny tantara araka izay itiavany azy.
Ataovy madio ny Apple Watch miaraka amin'ireo toro-hevitra ao aminay
Ao amin'ny iPad News dia hanome torohevitra tsara momba ny fitazonana ny Apple Watch ho madio sy mitandrina ianao mba hahafahany hitovy amin'ny mendrika azy foana.
Workflow, mianatra mamintina 200% amin'ny iPhone sy iPad
Workflow dia manolotra hetsika tsy manam-petra mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fitaovanao. Atorinay anao ny fomba fiasan'izany.
Multitasking sy iPad Pro misy fizarana roa miaraka amin'ny fahatongavan'i iOS 9
IOS 9 tonga miaraka amin'ny fahafaha-mampiasa kaonty mpampiasa samihafa hiasa amin'ny varavarankely samihafa miaraka amina multitasking tena izy.
iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID sy iPhone 6S amin'ny volana Aogositra
Efa manakaiky ny WWDC 15 ary mirehitra ny tsaho. IPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID dia miditra ao amin'ny tranokalan'ny Apple ary ny iPhone 6S dia afaka natomboka tamin'ny volana Aogositra.
1 × 26 iPad News Podcast: iPhone 6s, fiarovana Apple Watch, ary maro hafa.
Fizarana vaovao amin'ny podcast Actualidad iPad izay hiresahantsika momba ny iPhone 6s manaraka, ny fiarovana Apple Watch ary maro hafa.
Ahoana ny fanaovana ny litera iPad ho sahy
Ny safidin'ny fidirana amin'ny iPad dia ahafahantsika manova ny litera ho sahy hanatsara ny fifanoherana amin'ny fiaviana ho an'ireo mpampiasa manana olana amin'ny fahitana.
Ahoana ny fomba hahitako ny fahatsiarovana ampiasaiko amin'ny iPad
Rehefa manomboka miadana kokoa noho ny mahazatra ny iPad, dia tsara ny mijery hoe ohatrinona ny fahatsiarovana nampiasantsika sy hamafana fampiharana na lalao.
Fampidinana maimaimpoana maodely maherin'ny 200 Apple Watch amin'ny PSD
UI8 dia namoaka modely 200 momba ny interface interface Apple Watch amin'ny endrika PSD maimaim-poana izay azontsika ampiasaina malalaka amin'ny Internet
Manampy anao amin'ny fitantanana ny volanao manokana ny Fintonic
Fintonic dia fampiharana tena tsara hanangonana ny vola miditra isam-bolana sy ny fandanianao amin'ny tatitra feno sy ny vinavinan'ny fandaniana
Vintage na lany andro? Jereo raha eto amin'ity lisitra ity ny vokatra Apple anao
Apple dia manolotra lisitr'ireo fitaovana heveriny ho Vintage sy Obsolete
Ahoana ny fanovana ny rindrambaiko iPad
Ny fanovana ny sary ambadika ny efijery an'ny iPad-tsika dia tena tsotra ary vita amin'ny dingana vitsivitsy.
Fiambenana Apple Watch
Ny Apple Watch dia manana kaody fiarovana fa tsy ny rafitra fanoherana ny fangalarana iCloud.
Ahoana ny fizarana ny kitendry iPad
Ny fiasan'ny keyboard misaraka / misaraka amin'ny iPad dia manome antsika ny mety hiasa miaraka amin'ilay fitaovana mitazona azy amin'ny tanana roa.
1 × 25 podcast iPad News: nanandrana ny MacBook vaovao izahay, Nintendo amin'ny App Store sy maro hafa
Ny MacBook vaovao dia namela fahatsapana tsara ho antsika taorian'ny nahafahany nisedra azy. Ny efijery iPad Pro, ny lalao Nintendo ao amin'ny App Store ary maro hafa
1 × 24 iPad Podcast Vaovao: iPad Pro, Windows 10, Apple Watch ary maro hafa
Herinandro iray hafa dia mamakafaka ny vaovao lehibe momba an'i Apple isika, miaraka amin'ny iPad Pro, Windows 10 ary Apple Watch ho mpiorina voalohany.
Trasmend WiFi SD Card, ampio WiFi amin'ny fakantsarinao
Notsapainay ny karatra SD Trasmend WiFi SD ary asehonay anao ny fomba fiasa sy ny fehin-kevitra momba ity vokatra ity.
Fanatanjahan-tena sa vy? Ion-X sa Safira?
Ny kristaly safira dia manome fanoherana lehibe kokoa saingy ny kristaly Ion-X dia manome kalitao sary tsara kokoa. Iza no hisafidy?
Lalao Star Wars amidy amin'ny iOS sy Mac
Ho fankalazana ny andro Star Wars ny sasany amin'ireo lohateny tsara indrindra amin'ny saga ho an'ny iOS sy Mac dia ahena ho 50%
Ny "Scratchgate" an'ny Apple Watch sy ny vahaolana
Scratchgate dia tondra-drano ny media sosialy, miaraka amin'ireo mpiantsena milaza ny Apple Watch fa voakorontana tsy misy antony. Vahaolana? Tsotra sy mora vidy.
Inona no ho fiantraikan'ny fampiasana sy fandehan'ny fotoana eo amin'ny maodely Apple Watch?
Ny volamena, ny alimo ary ny vy no safidy atolotr'i Apple antsika amin'ny famatrehany. Izahay dia mamakafaka ireo fitaovan'ny tsirairay sy ny fomba hiatrehana ny fandehan'ny fotoana
Mophie dia mandefa tranga bateria sy fitehirizana vaovao ho an'ny iPad Mini sy iPhone 6/6 Plus
Vao avy nanambara tranga vaovao momba ny bateria sy fitehirizana ho an'ny iPad Mini sy maodely iPhone vaovao i Mophie.
djay 2 maimaim-poana amin'ny iOS voalohany
Na DJ matihanina ianao na mankafy fotsiny amin'ny filalaovana turntables ao amin'ny komity bitika, dia nalalaka voalohany tao amin'ny iOS i djay 2.
Notsapaina ny vera Apple Watch Sport
Ny fanoherana ny Ion-vera an'ny Apple Watch Sport dia voasedra
Ahoana ny fandrefesan'ny Apple Watch ny tahan'ny fitempon'ny fonao?
Manazava ny antsipiriany momba ny fandrefesan'ny Apple Watch ny tahan'ny fo ny Apple
Afaka milalao Halo amin'ny iPhone sy iPad anao izao ianao
Nandefa an'i Halo i Microsoft: Spartan Strike ary Halo: Spartan Fanafihana ho an'ny iPhone sy iPad
Ahoana ny fomba hanafenana ireo apps novidiana ao amin'ny iOS 8
Amin'ity fomba ity dia azontsika afenina ireo rindranasa novidiana teo aloha tao amin'ny App Store izay misy antony tsy tianay haseho amin'ny fizarana fividianana.
Ny zavatra tiako ho hita ao amin'ny iOS 9 mandritra ny WWDC 2015
Amin'ny 8 Jona dia hihaona amin'ny iOS vaovao 9. Ireto misy zavatra sasany tiako ho hita ao amin'ny rafitra fiasa Apple vaovao
Ny fampiharana mozika iOS 8.4 vaovao amin'ny horonan-tsary
Apple dia mandefa rindrambaiko mozika vaovao ao amin'ny iOS 8.4, miaraka amina endrika havaozina sy fiasa toa ny mpilalao mini.
Ny iOS 8.3 dia manakana ny fidirana amin'ny rindranasa
iOs 8.3 dia manakana ny fidirana amin'ireo rindranasa misy mpitety toa iFunBox, iExplorer na iMazing
iOS 8.3 dia mitondra kitendry Emoji miaraka amina kisary vaovao sy rafitra fitetezana hafa. Mampiseho izany aminao amin'ny horonan-tsary izahay.
Fampiharana Apple Watch
Inona ireo rindranasa efa napetraka mialoha amin'ny paoma Watch? Inona no azontsika atao amin'izy ireo?
Ahoana ny fametrahana Windows 95/98 amin'ny iPad
Misaotra ny Jailbreak isika afaka manao zavatra izay tsy ho vita mihitsy. Androany izahay dia mampiseho tutorial anao hametrahana Windows 95/98 amin'ny iPad
Rohy fampidinana IOS 8.3
Rohy fampidinana ofisialy ho an'ny kinova iOS 8.3 vaovao ho an'ny fitaovana rehetra.
Apple dia namoaka ny iOS 8.3 ho an'ny mpampiasa rehetra
Apple dia namoaka ny kinova iOS 8.3 vaovao ho an'ny mpampiasa rehetra
Famakiana, widget miaraka amin'ny vaovao tianao indrindra amin'ny iPhone sy iPad
Mpamaky RSS vaovao miaraka amina widget ao amin'ny Notification Center ny fanapahana
Mampiseho amintsika ny sary mihetsika hita maso ny video rehefa mampifandray ny Apple Watch
Misy horonan-tsary mampiseho amintsika ireo sary mihetsika izay hitantsika rehefa mampifandray ny Apple Watch amin'ny iPhone
Ahoana ny fampiasana ny fakantsary iPad
Ny fakantsary iPad, toy ny ankamaroan'ny rindranasa, dia tena mora ampiasaina.
Ahoana ny fampifandraisana iPad amin'ny TV
Manana safidy maromaro izahay hampifandraisana ny iPad amin'ny fahitalavitra: manomboka amin'ny rindrambaiko maimaim-poana mankany amin'ny fitaovana
Apple no tompon'antoka amin'ny fianjadian'ny iPad amin'ny varotra
Apple no tompon'andraikitra amin'ny iPad latsaka amin'ny varotra ary miankina aminao ny manamboatra azy
Izay azon'i Apple atolotra amin'ny Apple TV vaovao
Apple dia afaka mampiditra Apple TV amin'ny volana Jona, miaraka amin'ny fivarotana fampiharana ary ny fahaizana milalao lalao.
Navoaka i Beta TinyUmbrella 8.2.0.41 vaovao
Misy kinova beta vaovao an'ny TinyUmbrella ho an'ny Windows sy Mac
Smartwatches sy ny lainga momba ny fifandraisan'izy ireo amin'ny homamiadana
Ny lainga navoaka tao amin'ny New York Time momba ny fifandraisana mety misy eo amin'ny smartwatches sy cancer
Inona no azonao atao amin'ny Apple Watch raha tsy mifandray iPhone?
Azavainay ny fiasa azon'ny Apple Watch atao nefa tsy mifandray amin'ny iPhone
Miverina i TinyUmbrella hamonjy ny SHSH anao
Tinyumbrella, ny fampiharana mamela antsika hitahiry ny SHSH dia havaozina izay manokatra varavarana fomba vaovao hafa hametrahana iOS
IPad Pro? Tsia, ilay MacBook vaovao
Ny MacBook vaovao dia mitovy amin'ny heverina ho iPad Pro noho izay hita amin'ny voalohany
Torolàlana amin'ny fisafidianana Apple Watch mety indrindra ho anao
Manolotra torolàlana ho anao izahay hahafahanao misafidy ny maodely Apple Watch izay mifanaraka indrindra amin'ny tsirairay
Ny MacBook vaovao, ny laptop tena izy fa tsy ho an'ny rehetra
Ny MacBook vaovao dia solosaina finday tena izy izay natao hialana amin'ny tariby. Mety amin'ny rehetra? Tsia angamba.
Miaraka amin'ny ResearchKit Apple dia miditra amin'ny fikarohana ara-pitsaboana tanteraka
ResearchKit dia manolotra fitaovana sarobidy amin'ny fanaovana fikarohana ara-pitsaboana amin'ny alàlan'ny mpampiasa iOS ho ohatra.
Griffin dia mampiseho ny fototra iampangany azy amin'ny Apple Watch
Griffin dia tsy mandany fotoana ary efa mampiseho amintsika ny fototr'izany ho an'ny Apple Watch
Vidin'ny tarika ho an'ny maodely Apple Watch rehetra
Mampiseho ny vidin'ny tady samihafa ho an'ny Apple Watch izahay
Azontsika atao ny manavaka ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny firaketana ny anarantsika
Ny tsaho farany momba ny Apple Watch dia manome soso-kevitra fa afaka mampiavaka azy ireo amin'ny fanoratana ny anarantsika aminy isika.
Nisy olona efa nanandrana ny Apple Watch ary milaza amintsika amin'ny antsipiriany
Ireo izay afaka nanandrana ny Apple Watch dia milaza amintsika amin'ny antsipiriany amin'ireo asa izay mbola tsy fantatray
Ny zavatra mbola tsy maintsy fantatsika momba ny Apple Watch
Mieritreritra ve ianao fa mahalala ny zava-drehetra momba ny Apple Watch? Mbola maro ny lakilen'ny smartwatch izay tsy fantatsika
Apple dia mety hahagaga antsika amin'ny headphones Bluetooth amin'ny Apple Watch
Apple dia mety manana headset bluetooth vonona hiaraka amin'ny Apple Watch
Lunatik dia manomana tranga tsy misy rano amin'ny Apple Watch
Lunatik dia manomana tranga ho an'ny Apple Watch izay hahatonga azy io ho tantera-drano
Spotify sy Musixmatch: Karaoke Spotify
Spotify karaoke dia eto hihiraantsika duet miaraka amin'ireo mpanakanto tiantsika indrindra amin'ny Mac.
NetEase Cloud Music dia safidy vaovao amin'ny Spotify
Ny NetEase Cloud Music dia safidy iray amin'ny Spotify miaraka amina tranomboky mahavariana, ary tsia, tsy mora kokoa noho ny Spotify izy io, raha ny marina dia maimaim-poana.
ChooseBoard: fomba mora kokoa hanodinana fitendry (Cydia)
Raha manana kitendry antoko fahatelo maromaro napetraka ao amin'ny fitaovanao ianao, dia manoro hevitra ny SelectBoard aho, tweak iray ahafahantsika mifanakalo azy ireo mora foana
Apple Debuts Oscars Doka Voasoratra Amin'ny iPad Air 2 Ary Notantarain'i Scorsese
Ny orinasam-paoma dia namoaka doka vaovao tamin'ny andron'ny Oscars noraketina tamina iPad Air 2 ary notaterin'i Scorsese.
Apple dia afaka nandavaka teknolojia 32-bit tamin'ny iOS 9
Apple dia mety mikasa ny hamongotra, miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa, iOS 9, fitaovana miasa eo ambanin'ny teknolojia 32-bit.
Fizarana lalao vaovao tsy misy fividianana fampiharana ao amin'ny App Store
Ny App Store dia nanomboka nampiroborobo lalao tsy nisy fividianana fampiharana ao amin'ny App Store amin'ny pejy nasongadiny.
Gaga anao ity iPad Air 2 mihazakazaka Windows 98 ity
IPad Air 2 iray dia navotsotra nihazakazaka Windows 98, izay tsy isalasalana fa dingana voalohany amin'ny fampandehanana ny rafitra fikirakirana birao amin'ny iPad.
Apple Watch dia hanampy ny diabeta hifehy ny glucose ao aminy
Ny Apple Watch dia hanampy ireo marary diabeta hifehy ny haavon'ny siramamy ao aminy noho ny fampiharana vaovao iray
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 8.3 Beta 1
Apple dia nandefa ny beta voalohany an'ny iOS 8.3 miaraka amin'ny vaovao lehibe izay lazainay aminao amin'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny sary
Mail Pilot 2, fanavaozana izay mbola tsy ampy
Ny fanavaozana nandrasana efa ela niandrasana an'i Mail Pilot dia efa misy fa mbola tsy eo amin'ny ambaratonga takiana amin'ny fampiharana an'io vidiny io.
Rava ny fivarotana IPad, ampahany amin'ny tokony hanomezana tsiny ny iPhone 6 Plus?
Ny fivarotana ny iPad dia nihena tampoka taorian'ny fahatongavan'ny iPhone 6 Plus. Moa ve mahafaty ny varotra finday vaovao an'ny Apple an'ny takelaka?
Nanjary afaka ny Google Earth Pro
Google dia nanolotra maimaimpoana ny kinova Google Earth ho an'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Ny Apple iPad: manavao na maty
Ny iPad dia mitohy mihena ny varotra mandritra ny telovolana nisesy. Inona no azon'ny Apple atao hanovana azy?
Pro Cam 2 dia App Store amin'ny herinandro
Toy ny isaky ny alakamisy, Apple dia mamadika fampiharana maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny herinandro iray. Tamin'ity herinandro ity ny fampiharana voafantina ...
Tonga ny tsingerin-taona fahadimy an'ny iPad!
Manantona anay amin'ny tsingerintaona fahadimy an'ny iPad amin'ny dia amin'ny alàlan'ny tantarany, ny fivoarany, ny plus ary ny minus.
IOS 8.1.3 Misintona rohy ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch
Rohy fampidinana mivantana ho an'ny iOS 8.1.3 sy ny vaovao rehetra tafiditra ao amin'ity fanavaozana ity
Maka tahaka an'i Apple ve i Microsoft?
Izahay dia mijery ny làlana vaovao alehan'ny Microsoft hatramin'ny nananganana ny Windows 10 sy ny fitovizany amin'i Apple.
Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hamoronana fampiharana
Izahay dia mijery ny lafiny hafa amin'ny fampiharana miaraka amin'ity torolàlana ity ho an'ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hamoronana fampiharana.
PlayBox, safidy tsara indrindra amin'ny PopCorn, saingy tsy misy Jailbreak
Manolotra safidy vaovao hafa amin'ilay horonan-tsary PopCorn antsoina hoe PlayBox izahay
Mahazoa maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny fotoana fohy ny iMazing
iMazing, fampiharana izay safidy tsara amin'ny iTunes, dia azo alaina maimaim-poana tanteraka amin'ny fanarahana ireo dingana ireo.
Nisy fotoana nandany tao amin'ny Apple tsara kokoa?
Feo maro no milaza fa very ny spark izay niavaka azy tamin'ny lasa i Apple. Marina ve fa talohan'izay dia niasa tsara kokoa ny zava-drehetra?
Griffin Accessories dia mampiditra tariby miverina amin'ny jiro miverina
Ny orinasan-tserasera Griffin dia nanambara tariby misy taratra miverina amin'ny CES2015.
Smart Cover: ilay fonony izay misokatra sy mikatona irery
Misokatra sy mikatona ho azy ny Smart Covers vaovao ary azo aseho eo am-baravarankely fivarotana Apple any afovoan'i Londres
8 taona lasa izay androany Apple dia nanolotra ny iPhone
androany dia manamarika ny faha-8 taonan'ny nanombohana ny iPhone voalohany, ny smartphone voalohany natombok'i Apple. Asehonay anao manontolo ny famelabelarany.
Serivisy fitahirizana rahona (I): Box
Manadihady ny serivisy fitehirizana rahona manandanja indrindra izahay. Amin'ity lahatsoratra voalohany ity dia manomboka amin'ny Box isika.
Mitandrema raha tafiditra ao anatin'ity lisitra ity ny teny miafinao iCloud
iDict dia mahavita mandingana ny hidin-tranon'ny Apple ary afaka mamaky kaonty iCloud an'ny mpampiasa sasany izay mampiasa tenimiafina malemy
Fitsarana vaovao manohitra an'i Apple amin'ny fampihenana ny toerana malalaka misy amin'ny iOS 8
Ny habaka malalaka an'ny fitaovana Apple dia nahena niaraka tamin'ny fanavaozana vaovao ny iOS 8, zavatra iray izay efa eny amin'ny fitsarana.
Inona no antenaintsika amin'ny Apple amin'ny 2015?
Inona no hitantsika amin'ny Apple amin'ny taona 2015?
Apple dia mamela anao hamerina ny fividianana avy amin'ny App Store mandritra ny 14 andro
Apple dia mamela anao hamerina ny fividianana iTunes sy App Store ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fividianana tsy misy fanazavana.
i-Caseboard, ny fitendry backlit amin'ny teny espaniola ho an'ny iPad
i-Caseboard dia klavier ho an'ny iPad Air, amin'ny Espaniôla ary misy loko azo hafanaina sy haingam-pandeha aorinan'ny fanalahidy.
Ataovy fampisehoana faharoa ho an'ny Mac miaraka amin'ny Duet Display ny iPad-nao
Duet Display, fampiharana ahafahantsika mampiasa ny iDevices toy ny hoe efijery faharoa ho an'ny Mac's
Toca Kitchen 2: miverina any an-dakozia ny ankizy
Toca Boca dia manolotra ny fampiharana vaovao ho an'ny ankizy kely: Toca Kitchen 2 ahafahan'ny ankizy mahandro izay rehetra tonga ao an-tsaina.
Fanomezana dimy tsara ho an'ity Krismasy (II) ity: lozisialy
Manolotra sosokevitra dimy na fonosana fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad azonao omena izahay amin'ny Noely. Ho an'ny tsiro rehetra: lalao, famokarana, ankizy ...
Duet Game, ny lalao tonga lafatra hampihetsi-po ny hakinganao sy ny fahatsapanao
Duet Game dia lalao mahafinaritra, tsy noho ny isan'ny ambaratonga ananany ihany fa noho ny famolavolana sy ny feonkira
Fanomezana dimy mety indrindra amin'ity Krismasy (I) ity: Fitaovana
Manolotra fanomezana dimy izahay ho an'ity Krismasy ity izay hitanao fa tena tsara
Rohy fampidinana IOS 8.1.2
Rohy fampidinana mivantana ny rindrambaiko iOS 8.1.2 ho an'ny fitaovana tsirairay avy amin'ny mpizara Apple azy manokana
Tapaho ny Om's Rope lasa biby fiompy virtoaly
Om Nom, kintan'ny Cut The Rope, dia hilalao lalao biby virtoaly vaovao manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Ao anatin'izany dia hanana namana vaovao izy ...
Mampianatra antsika i Apple fa mahomby amin'ny iPad Air 2 amin'ny doka vaovao
Apple dia nandefa dokam-barotra vaovao ho an'ny iPad Air 2 izay tiany hanasongadinana ny fahaizany mamindra amin'ny toe-javatra samihafa.
Game of Thrones dia tonga amin'ny App Store
Game of Thrones dia mamely ny App Store amin'ny fizarana voalohany misy enina
Ny emulator PSP ho an'ny iOS, PPSSPP, dia nohavaozina
Ny emulator fantatra fa tsy miankina amin'ny jailbreak dia havaozina ho afaka hapetraka mivantana amin'ny fitaovana mifanentana rehetra.
Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny iCloud, ary tsy miraharaha azy i Apple
iCloud dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary Apple, mahafantatra ny olana, dia toa tsy mandray azy io ho zava-dehibe.
Ahoana ny fanontana amin'ny iPad anao
Amin'ity lesona ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika manonta mivantana avy amin'ny iPad na iPhone.
Raha hividy iPad Mini Retina ianao dia mitandrema amin'ny vidin'ny varotra
Ny fihenan'ny vidin'ny iPad mini 2 na iPad Mini Retina dia tsy nahatratra ny fivarotana tamin'ny fomba mitovy, ary indraindray, azonao atao ny manaloka ny maodely, na mandoa vola bebe kokoa amin'izany.
Azonao atao izao ny mifehy ny Spotify amin'ny solosainao amin'ny iPhone sy iPad
Spotify dia mamela anao hifehy ny famerenana mozika avy amin'ny iPhone na iPad amin'ny solosainao.
iMazing: ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes
iMazing, fantatra taloha amin'ny anarana hoe DiskAid, dia mamela antsika hitantana ny atin'ny fitaovantsika amin'ny fomba milamina kokoa noho ny iTunes
SleekCode: ampanjifaina ny efijery hidinao (Cydia)
Ny SleekCode dia ahafahantsika manova ny efijery mamoha ny fitaovantsika, miaraka amin'ny efijery izay ananantsika raha manana kaody hidy isika
PrefDelete: esory ireo tweaks avy amin'ny iOS Settings (Cydia)
Amin'ny PrefDelete dia afaka mamafa ny tweaks avy amin'ny Cydia isika nefa tsy mila miditra amin'ny Cydia, fa azontsika atao amin'ny iOS Settings.
Ny kalitao mahavariana an'ny efijery manohitra ny famirapiratan'ny iPad Air 2
Ny efijery anti-glare ampiasaina ao amin'ny iPad Air 2 dia mamela ny rehetra ho talanjona amin'ny kalitaony. Ny fampiasana safira amin'ny maodely ho avy dia dinihina indray izao
Ahoana ny famindrana ny vaovao amin'ny iPad taloha ho any amin'ny iray vaovao
Raha afaka herinandro vitsivitsy dia iray amin'ireo mpampiasa nieritreritra ny hanavao ny iPad "taloha" ho an'ny iray amin'ireo ...
Tonga ao amin'ny iPad Air 2 ve ilay "Bendgate" malaza?
Hatramin'ny nisehoan'ny "Bendgate" malaza dia notsapaina ny vokatra Apple rehetra hahitana raha mora miondrika izy io, anjaran'ny iPad Air 2 indray izao.
Ahoana ny fomba hanaovana antso amin'ny iPad
Miaraka amin'ny iOS 8 isika izao dia afaka manao antso an-tariby amin'ny iPad fa tsy mila mikasika ny iPhone. Atorinay anao ny fomba.
Fampitahana iPad Mini 3 vs iPad Mini 2, inona no mampiavaka azy ireo?
Amin'ny famaritana ny iPad Mini 3 efa natolotra dia manao fampitahana eo amin'ny iPad Mini 3 sy iPad Mini 2 aho, taratra raha mendrika ny mividy izany.
Ahoana ny fomba hananganana Handoff amin'ny iOS sy Yosemite
Ireto misy dingana tokony harahina hanamboarana araka ny tokony ho izy ity fisehoan-javatra Continuity vaovao ity amin'ny iPhone, iPad ary Mac anao.
Afaka miseho ao amin'ny Apple Maps ny orinasanao noho ny Maps Connect
Apple Maps Connect dia mamela anao hanampy maimaim-poana amin'ny Apple Maps ny orinasanao.